Pony dị ka anụ ụlọ | Anu ulo | Foto ndị na-acha agba agba maka nbudata
A na-enwe mmasị na ụmụaka, ma ọ bụ ọnụ ala ma dị mfe ilekọta
Okposụkedi emi ẹkefiọkde ke usụn̄ emi ẹkedude ke Germany ke ediwak isua, n̄kpọ emi ekenyenede ke inyan̄ ebiet emi ama ọbọhọ nnyịn. Ọ na-abụkarị ihe dị mma inye nwa gị ụbọchị ọmụmụ ma ọ bụ oge ọzọ a na-eji pony, ma eleghị anya ọbụna Kutschwägelchen.
Nwatakịrị na-ahụ n'anya ma na-edozi onwe ya, mana: ọ dị mkpa ka ndị na-ahụ anya dị mkpa
Ọ dịghị ihe dị njọ na nke ahụ, n'ihi na ịmekọrịta ịnyịnya ndị a magburu onwe ha nwere ike ịba uru maka nwatakịrị. Ma, ọ dị mwute ikwu na o mehiere n'echiche nke obere ịnyịnya ndị a, nke na-ejikarị aka ọjọọ anụ. Onye na-elelị anya mmiri ndị na-edozi ahụ ma kwenyere na ha nwere ike inweta ihe kachasị mma na nlekọta. Ha na-edozi anya; ma anụ ọ bụla chọrọ nkwụsi ike iji biri ndụ dị mma dịka ya. Anyị obere obere mmiri.
A pony dị ka Pita maka ụmụ
Site na mmalite, ma ọ bụrụ na onye bi n'obodo enweghị ala zuru oke ma ọ bụ nwee onye ikwu na mba ahụ, ọ gaghị enwe ike ịkpa àgwà nke ndị na-agba ọsọ. A pony, dị ka m kwuru, chọrọ ohere - na ọbụna obere. Ọ chọrọ ibi na ịta nri site na mmiri ruo n'oge mgbụsị akwụkwọ. N'ebe nna ya dị na Nordic ọ na-apụ apụ ọbụna na ọnwa oyi. N'ihi ya, ọ bụghị ịnyịnya siri ike!
N'ezie, anyị ka chọrọ anụ ụlọ nke chọrọ ibu nnukwu iji nweta oge oyi ma ọ bụ nri nchekwa (ihe gbasara 30-35 otu narị nke hay). Na nke a chọrọ otutu ohere! Ọ na-ewe ihe dị ka narị kilogram ise oatmeal; n'ihi na pony enweghị ike ibi na hay nanị.
Ọzọkwa, a ka nwere ohere maka ahịhịa ọka iji kesaa mkpa, n'ihi na ọbụna pony chọrọ ka ọkụ na nro. Anyị adịghịdị achọ ikwu banyere oge ọrụ, n'ihi na naanị ị ga-ewere ha iji kpochaa barn kwa ụbọchị ma fesaa ahịhịa ọhụrụ. Tụkwasị na nke ahụ, nlekọta anya nke ịnyịnya ahụ n'onwe ya na ahịhịa na ụja, n'ihi na ma ọ bụghị na ị ga-enwe oge ụfụ, anụmanụ na-adịghị mma.
Site n'ịzụta ezigbo odo odo ka e jikọtara ọnọdụ ụfọdụ. Echela na ugbo buru ibu. Na nke kachasị mma, nke a zuru ezu maka oke bekee, ma ọ bụghị maka pony.
Akwụkwọ a bụ maka ndị bi n'obodo karịa ndị bi n'ime ime obodo, ndị na-enyekarị ọnọdụ ka mma. Ndị bi na nso obodo ahụ nwekwara ike ịchọta ụzọ ha ga-esi na-agba ịnyịnya ya maka ịgbazite n'ugbo na ebe ịta nri.
E kwesịkwara icheta na pony adịghị ọnụ ala. Ma ị na-azụta Icelander, Shetlander ma ọ bụ Norwegian, ị ga-agụnye anụmanụ na banyere 750 Euro - dabere na agbụrụ, ịnya ụgbọ ala na ịkwọ ụgbọala. Tụkwasị na nke ahụ, e nwere ihe siri ike, ihe dị iche iche, bridles, akwa akwa, ịkwaga na ịghacha nkịta na onye ọrụ ugbo.
Nwa na pony
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị kwadoro nsogbu ndị a niile, ị ghaghị ịla azụ ịzụta. Achọla ịzụta ịnyịnya dị ala. Enwere otutu ihe n'azụ ya. Ma ọ bụ anụ ahụ dị njọ ma ọ bụ na ọ bụghị nwata, ihe oriri, ma ọ bụ ọrịa.
E kwesịkwara icheta ya maka nzube nke ịchọrọ ịzụta pony. Maka umuaka umuaka, ihe kachasị nta na-ezuru. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnyagharị, ị ga-azụ Icelandic ma ọ bụ Norwegian. Ndị a nwere ihe dị elu banyere mita na ihe dị n'elu ya.
Site na okike, ndi ozo na-enwe obi uto umuaka. Onye nwere ike iche banyere foto ka mma karịa ụmụaka na pony. Ma ọ na-agba na oge okpomọkụ, na-adọkpụ a na-ebugharị abụọ ma ọ bụ na-agbatị n'ihu oche ahụ na oyi - ọ bụ ezigbo enyi nke nwoke. Ọ bụrụ na ị nwere ubi ka ukwuu, ịnwere ike iji obere ịnyịnya a maka ugbo. Dịka nha ya na nri oriri ya, ọ bụ ọbụna karịa na arụ ọrụ ka nnukwu ịnyịnya.
Ugbu a ị nwere ike ịchọta ebe ịzụta pony. N'ebe a, ị ga-achọta ụdị anụmanụ dị iche iche nke na-enye ndị na-anụ uhie na ngalaba mgbasa ozi ha. N'akwụkwọ akụkọ kwa ụbọchị, a na-enyekarị obere ịnyịnya na-ere ere.
Ezigbo anụ ụlọ maka ụmụaka | Anu ulo